Nohavaozina miaraka amin'ny endrika vaovao sy maro hafa ny kinova Spotify birao Androidsis
Manuel Ramirez | | About us, Streaming
Vao nanambara ny fanavaozana ny rindrambaiko desktop miaraka amina endrika vaovao i Spotify ary andiana fiasa vaovao ho an'ny mpanjifa premium, izay azo antoka fa hahafantatra ny fomba hanomezana lanja azy ireo amin'ny fahafenoany.
Ity famolavolana vaovao ity dia natao mba hahatonga ny atiny ankafizin'ny mpampiasa ho mora tohina kokoa noho ny endriny nohatsaraina sy a fanaraha-maso tsara kokoa amin'ny famoronana playlist na playlists.
1 Fifanarahana vaovao ho an'ny rindranasa desktop
2 Ireo fiasa vaovao: mamorona playlists mora kokoa amin'ny Spotify
3 Ho an'ny mpanjifa premium: tahiry bandwidth
Fifanarahana vaovao ho an'ny rindranasa desktop
Ity fanavaozana Spotify ity dia tonga amin'ny kinova desktop an'ny serivisy fandefasana mozika ary tanjona kendrena fa ny traikefa fihainoana no mety indrindra sy azo ampiasaina indrindra. Izany hoe, apetratsika ny fampiharana Android izao mba hifantoka amin'ilay azontsika atao amin'ny PC na laptop-nay.
Fanavaozana izay, hoy ny Spotify mihitsy, dia tonga taorian'ny fitsapana nandritra ny volana maro izay Nahazo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpampiasa ny sehatra. Azontsika atao ny milaza fa ity fanavaozana ity dia natokana ho an'ny endrika madio kokoa ary miaraka amina fanaraha-maso marobe.
Ary marina fa fantatro nanova zavatra mitana toerana sasany izy ireo toa ny zava-mitranga amin'ny mpitady ary izany dia hita eo amin'ny ilany havia amin'ny pejin'ny fitetezana. Raha atao teny hafa, ny tadiavina dia ny fahafahan'ny mpampiasa mitady ny atiny tadiaviny haingana kokoa.
Zava-baovao roa hafa no biraon'ny mpampiasa tsirairay ary izany ankehitriny dia ampidiro ny mpanakanto tianao sy ny hira tianao indrindraFaharoa, ny fahaizana mitendry ny onjam-peon'ny hira na mpanakanto amin'ny fipihana tsotra fotsiny ny bokotra "..." eo amin'ny menio.
Ireo fiasa vaovao: mamorona playlists mora kokoa amin'ny Spotify
Ankoatry ny fanovana endrika natao hanadio azy, ny zavatra niainan'ny famoronana sy fitantanana lisitra, mba hananantsika fifehezana bebe kokoa azy ireo.
Anisan'izany fahaiza-manao tokony hananantsika:
Ampidiro ny famaritana ao amin'ny playlist
Sivano ireo hira misy
Manampia atiny vaovao noho ny bara fikarohana tafiditra ao anaty
Ho an'ireo mpampiasa izay mamerina azy ireo dia ho hitany fa zava-baovao ny fahaizana manitsy ny filaharana filalaovana ary mijery ireo hira izay henoina tato ho ato ao amin'ny rindrambaiko desktop. Safidy hafa dia ny fahaizana manafatra ny tranomboky amin'ny alàlan'ny menio mitete vaovao izay ho hitanao eo amin'ny zoro ambony ambony.
Ny tiako holazaina dia inona hanana fifehezana bebe kokoa amin'ny fivoriana fihainoana izahay andao isika hanao ny lisitry ny lisitry ny tianao indrindra amin'ny Spotify.
Ho an'ny mpanjifa premium: tahiry bandwidth
Ny zava-baovao ao amin'ny Spotify dia ny fahafahan'ny mpamandrika premium ampidino ny mozika tianao sy ny podcast tianao ho an'ny playback ivelan'ny Internet. Avy amin'ny rindrambaiko birao izao isika dia afaka mahita ny bokotra fampidinana hananana ny mozika ivelan'ny Internet.
Nampiana koa hitsin-dàlana fitendry vaovao ianao dia afaka mahita rehefa manavao ny fampiharana amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana hitsin-dàlana + ?.
Ity iray ity vaovao farany Spotify dia nanomboka nihodina ka hahatratra ny mpampiasa rehetra manerantany amin'ny herinandro ho avy io hahafahantsika mahafantatra ny interface vaovao nohatsaraina sy ireo vaovao rehetra mifandraika amin'ny playlists sy ny mode offline an'ny kinova desktop. Ary raha mahatsapa ho mozika ianao dia aza diso anjara ireo mpanakanto be mpihaino indrindra tamin'ny taona 2020.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Spotify dia manavao ny rindrambaiko amin'ny birao miaraka amina endrika vaovao sy fampiasa